विद्यार्थीहरुले स्मरण शक्ति कसरी बढाउने ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
विद्यार्थीहरुले स्मरण शक्ति कसरी बढाउने ?
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार ६ : ५३ बेलुका
स्मरण शक्ति कमजोर भएका कारण सवैभन्दा बढी तनावमा विद्यार्थीहरु देखिन्छन् । अझ परीक्षा नजिक छ भने कतिपय त यही चिन्ताले विरामी समेत पर्ने गरेका छन् । उमेर ढल्किँदै जाँदा स्मरण शक्ति कमजोर हुँदै जानु सामान्य हो, तर बाल्यावस्थामै कसैको स्मरण शक्ति यति बोधो हुन्छ कि पढेका कुरा क्षणभरमै विर्सिन्छन् ।
केही रोग नभएमा यसो हुनुको पछाडि उनीहरुले स्मरण शक्ति कमजोर भएकै हो भन्न नमिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् । किनकी उनीहरु पढेका कुरामात्र बिर्सिने हुन्, अरु कुरा उनीहरुको दिमागमा ताजै रहन्छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको विषयवस्तुमा उनीहरुको लगाव नहुनु नै हो । यसका लागि विज्ञहरुले केही उपाय अपनाउन सकिने जनाएका छन् ।
कुनै पनि विषय सुरुमा पढ्दा बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ । त्यसलाई दोहोर्‍याएर पढ्ने र मुख्य–मुख्य बुँदाहरू टिपेर राख्ने । सकिन्छ भने छोटकरीमा सांकेतिक शब्द बनाउने, जसले गर्दा सम्झिन सकियोस् ।
दोस्रोमा जुन विषय पढेको हो, त्यसमा आफैले प्रश्न बनाउने र त्यसमा आफैले फेरि उत्तर दिन प्रयास गर्ने र लेखेर पढेमा र उत्तर दिने बानी गरेमा झनै सम्झिन सजिलो हुन्छ । उत्तर दिने बेलामा मुख्य–मुख्य बुँदा सम्झेर दिएमा सम्झिन सजिलो हुन्छ । जुन विषय पढेको हो, त्यसलाई राम्रोसँग बुझेपछि मात्रै अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।
आफूले आफूलाई नै जाँच गर्ने । जे विषय पढ्न सकियो अन्त्यमा त्यस विषयको मुख्य बुँदालाई सम्झेर के–के राम्रोसँग बुझ्यो भनेर एकपछि अर्को सम्झिँदै जाने अथवा त्यसलाई लिखित रूपमा टिपेर राख्नाले स्मरण–शक्ति लामो समयसम्म रहिरहने हुन्छ ।